Basikety – CEBB: lany ho filoha Rakotonanahary Ndranto | NewsMada
Basikety – CEBB: lany ho filoha Rakotonanahary Ndranto
Tontosa, omaly alakamisy 25 oktobra, ny fifidianana eo anivon’ny CEBB (Commission des Entraineurs du Basket-Ball), eo anivon’ny federasiona malagasy taranja Basikety. Lany ho filoha, araka izany, Rakonanahary Ndranto, antsoina ihany koe hoe Tagg. Izao fifidianana izao no natao dia mba ho fanajana ny sata mifehy ny federasiona.
Mpifaninana miisa roa no nirotsaka hofidina filohan’ny CEBB tamin’ity indray mitoraka ity, dia Rakotonanahary Ndranto sy Ramallingom Jean Claud na i Daclo. Rehefa natao ny tambatr’isa dia nahazo ny isam-bato 61 i Tagg ka izao lany ho filoha mpitantana izao. Tetsy ankilan’izay, isam-bato miisa 9 no azon’i Daclo. Ity farany izay mpanazatra ny ekipan’ny COSPN2 Atsinanana. Raha nandraindraina kosa ny hirotsahan’ny Razafindrakoto Maminirina, antsoina hoe Kim’s, nefa tsy hita tao anatin’ ny lisitry ny hofidina, nandritra ny fifidianana omaly izy.
Marihina fa nahatratra 72 no isan’ny mpifidy tonga nandatsa-bato ary saika nahatonga solontena avokoa ireo klioba sy ratsa-mangaika rehetra, na ny teto an-dRenivohitra izany, na ny tany amin’ny faritra. Nanamafy ity filoha vaovao ity fa adidy mafy no iandraiketany ka ilàny ny fanohanan’ireo mpanolotsaina sy ny mpikambana rehetra ao anatin’ny CEBB.
Ankoatra ny fifidianana izay notontosaina, omaly, nifanindry an-dalana tamin’izany ny fivoriambe izay nanaovan’ireo mpitantana teo aloha ny tatitra rehetra, nandritra ny fotoana nitantanan’izy ireo.